संविधानको गर्भमा कर्णाली२०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पायो । २ बर्षका लागि गठन भएको संविधानसभा २ बर्ष आयु थपेर २०६९ जेठ १४ मा विघटन भयो । २०७० मंसीर ४ मा…
कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन्, गुरु मार्क्सले धर्मलाई अफिम भनिदिएकोले कम्युनिस्टहरू धर्म मान्ने र अफिम खाने कुरालाई सिद्धान्ततः बराबरीमा बुझ्ने गर्दछन् । मार्क्स पूर्वीय धर्म र दर्शनका ज्ञाता थिएनन्, उनले अवलम्बन गरेको विचार–दर्शन जीवन र जगत्को सृष्टि रहस्यको उत्खनन गर्नेतिर नभई केवल ‘पेट भर्ने ध्येयमा केन्द्रित’…
नागरिकता सम्बन्धी नेपाली कर्मचारीलाई प्रश्न
महाभारतका एक प्रमुख पात्र कुन्तीका जेठा छोरा कर्णले अहिले नेपालमा आएर नागरिकता मागे भने नेपालका सरकारी कर्मचारीले के भन्दा हुन् ? अविवाहित कुन्तीबाट जन्मेका हुनाले ‘बाबुको पत्ता नलागेको’ भनेर नागरिकता दिँदा हुन् वा दुर्योधनले राजा बनाएका कर्णलाई ‘महाराजाधिराज’ भनेर ? संविधान अनुसार आमाको…
मानव सभ्यताको विकास क्रमलाई हेर्दा हाम्रा पुर्खाहरु जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताए । गीठा, भ्याकुर खाने र रुखका बोक्राहरुले जीउ छोप्ने, ओडारमा बास बसेको इतिहास छ । त्यतिबेला कुनै धर्म थिएन । कुनै जात पनि । त्यस समयको हामी अहिले कल्पना मात्र गर्न सक्छौं ।…
तस्बिर : गुगल विकासको प्रमुख औजार शिक्षा हो । औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने थलो विद्यालय हो । विद्यालय विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने वैधानिक संस्था हो । यो शान्ति क्षेत्र हुनु पर्छ भन्ने एक विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, यहाँ विद्यालय राजनीति…
२३ फागुन । धनगढीको एउटा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने एकजना महिलाको परिवार सुखी थियो । दुई मात्र सन्तान इश्वरका वरदान थिए । १४ र १० वर्षे छोरी हुर्केपछि उनी घर बाहिरको काम समेत भ्याउन थालेकी थिइन् । तेस्रो सन्तानको त कल्पना पनि थिएन ।…
सहरमा कि त पानीजहाजको चर्चा छ कि त कोरियाना कफी गफको। आखिर म पनि कफीको पारखी नै हुँ पानीजहाजप्रति पनि उत्तिकै लगाव छ। गफ गर्न त जान्दिनँ, तर पनि विचार आयो, मेरा प्रिय पानीजहाज र कफी दुवैलाई मिसाएर गफ गरें भने त्यो पक्कै पनि दिलचस्पी…
वहिष्करण, असमानता र सम्वृद्धी
वहिष्करणको निरन्तरता २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संबिधान जारी गरेको भएपश्चात भारतले शुरु गरेको नाकाबन्दीको एकहप्ता पछी नेकपा एमालेको अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले भारतीय प्रत्रकारहरुलाई संवोधन गर्दै भनेका थिए ‘नेपाल एक छोटा देश है, देश छोटा हो सक्ती अगर सार्वभौमसत्ता…
नेपाली समाजमा महिलासँग सम्बन्धित कुरा उठाउँदा पुरुष प्रधान समाजको कुरा सहजै आउँछ। पुरूष प्रधान समाजको कुरा यति उठ्छ कि, यो एउटा फितलो थेगो जस्तै भइदियो। तर, कुरोको चुरो यसैमा छ। जगलाई छोडेर घरको कुरा गर्न नमिले जस्तै। कसरि पुरुष मुख्य र महिला सहायक भन्ने…